पदको मोह र हामी नेपाली | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
उसको पढाइ सकिन शायद अब २ हप्ता मात्र बाँकी छ। अप्रिलको १५ (२०१३) भित्रमा सक्छ जस्तो लाग्छ। जुन छात्रवृत्तिमा ऊ पढिरहेको छ, त्यसको नियमानुसार ऊ पढाइपश्चात फर्केर केन्या जानैपर्छ। एकदिन ठट्टैमा मैले भनेँ: “केन्या पुगेपछि त तँ त्यहाँको कृषि अनुसन्धान निकायको बोस हुने होलास् – Plant Breeding को लागि अमेरिकाको टप ३ मा पर्ने विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएर जाँदै छस्, यत्रो प्रोफेसनल नेटवर्क बनाएर जो जाँदैछस्। बिर्सलास् होइ?“ हाँस्दै भन्यो: “कहाँ बिर्सन्छु र साथीलाई!!” अनि अलि गम्भीर भएर भन्यो: “हेर केटा, सोचेजस्तो सजिलो छैन केन्यामा। तेरोमा भन्दा भिन्नै होला, तर कुरीति र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ। मान्छे काम होइन, पद खोज्छन। पद पाएर काम होइन, खोक्रो पहिचान खोज्छन। ‘फलानो पोस्टमा बसेर तिलाना मान्छे अण्डरमा राखेर, यति तलब बुझ्ने, यस्तो गाडी चढ्ने’ आदि-इत्यादी सुन्न मन पराउँछन। काम त उही हो।“
उसले यति भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो परिपाटी याद आयो। काटीकुटी दुरुस्त हैन त? सरकारी काम, कहिले जाला घाम! पदमा रहेका, पिउनदेखि हाकिमसम्मकाले आफ्नो फुइँ देखाउन खोज्छन, अधिकारको दुरुपयोग गर्न खोज्छन। बहुमतले त गर्छन पनि। सरकारी, निजी दुवैमा, तर निजी क्षेत्रमा अलि कम होला कि भन्ने मेरो अनुमान छ, गलत पनि हुन सक्छु। कुनै कर्माचारीलाई भेट्न जानुस काम लिएर (कानुनसम्मत हिसाबमा प्रक्रिया मिलाएर), मुण्टो, जीउ सब बटारेर अर्कोतिर चल्दिन्छन्, ‘माड्साप’ स्टाइलमा। रवाफ राजाको भन्दा चौखण्ड धेरै। सेवाग्राहीलाई मुस्कान, मीठो बोली, आदर झन परको कुरा भयो। काम छरितो, प्रशासन चुस्त कसरी पार्ने भन्ने चिन्ता भन्दा बढी मेचपछाडि तौलिया राख्न रूचाउँछन। माथिल्लो तहका कर्माचारी झन भैँमा न भाँडाँ। जनताले तिरेको करबाट बनेको कार्यालयमा बस्नु छ, जनताको कर नै तलब बुझ्छन, तैपनि काम लिएर जाँदा मान्छे आए भनेर उनर्लाई नै टाउको दुख्ने। पार्टी-समारोहतिर पुग्दा ‘फलानो विभागको तिलानो अफिसर’ भनेर चिनाउन चैँ गर्व मान्ने, तर त्यो चिनारीको कर्तव्य भने पोलेर खाइदिने? पद पाउनु मात्र अभीष्ट ठान्ने, कर्तव्यलाई सन्नुसमा थुन्ने हाम्री कति दरिद्र? किन यस्तो भएका हामी? संस्कारको दोष हो, या पढाइ/शिक्षाको कमजोरी, या ‘हामी यस्तै हो’?
मेरो बुझाइमा अति नै तुच्छ, सतही, आडम्बरी जे भन्नुस (अङ्ग्रेजीमा shallow), मान्छेहरूले पदलाई अघि राख्छन, दायित्वलाई पछि। यिनीहरू काम (कर्म) भन्दा ठूलो अरूलाई (शान, मान) मान्छन। गाउँमा बस्ने पदविहीन कृषकले दूध दुहुन, खेत जोत्न, बाली फलाउन छोड्छ? छोड्दैन नि। शहरमै बस्ने पदवालाले पनि त काम गर्न, परिवार पाल्न छोड्दैन। तब कर्म महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि किन नाम-सर्वनामको पछि लाग्छन मान्छे?
उद्घाटन सभा-समारोहमा, पुरस्कार वितरण समारोहमा, सामाजिक विहावारीमा, ठूलो पदमा काम गर्नेको रवाफ बेग्लै। मान पनि बेग्लै खोज्छन। हुन त समाज पनि त्यस्तै, पदअनुसारको व्यवहार गर्छ (पैसा कमाएको स्थिति हेरेर पनि)। भर्खरै खुलेका क्लब, संगठनहरूमा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष नै हुनुपर्ने; नेतृत्व गर्न नआए/नसके पनि उच्च तहकै पद चाहिने; सुन्दा आकर्षक पद चाहिने हाम्रो पुरानो बानी हो। देशका खेलकुद, चलचित्र, प्राज्ञिक परिषदहरु, सबैमा शक्ति-प्रदर्शन गरेर पद हत्याउँछन्। दलहरुको कुरा के गर्नु, एउटै अनुहारले पद सम्हाल्छ वर्षौँसम्म। अझ थप्ने हो भने सबै बेथिति भएको हाम्रो देशमा एकै ठाउँमा २-३ पद को निर्माण हुन्छ ताकि सबैको ‘त्यो’ पद पाउने आशा पूरा होस्।
पद पाएपछि काम गरेर देखाइदिए पनि हुन्थ्यो। पदअनुसारको नाम, दाम भेटेपछि मन लगाएर दायित्व निर्वाह गरिदिए गुनासो रहन्थेन। धाक लगाउनलाई, शक्तिको दुरुपयोगका लागि प्रयोग हुन्छ र त हुनुपर्ने काम पनि हुँदैन, अनि गर्न खोज्नेलाई पनि गर्नबाट रोकिइन्छ। त्यसैले पद खोज्ने प्रथा नराम्रो।
काम गर्न आउँदैन। अरूलाई पनि गर्न दिँदैनन। तैपनि पद सबैलाई प्यारो। बुझ्न मुश्किल।
[[पहिलो ड्राफ्ट फेब्रुअरीमा लेखेको; पूरा रूप भने ACC 20-20 क्रिकेट खेल हेर्दै गर्दा दिएको। नसुतेको ४७ घण्टा भयो। गल्ती टन्न होलान्। माफी माग्छु।]]
विधवा र रङ्ग: सानो टुक्रा →